अर्को २ Years बर्षमा, मेरो भविष्यवाणी | Martech Zone
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शुक्रबार, डिसेम्बर 12, 2014 Douglas Karr
भविष्यको बारेमा सोच्न रमाइलो छ र यसले के ले ल्याउँदछ। मेरो भविष्यवाणीहरूको संग्रह यहाँ छ ...
कम्प्युटर मोनिटर लचिलो, प्रकाश, फराकिलो र सस्तो हुनेछ। प्लास्टिकको ठूलो मात्रामा बनेको, निर्माण प्रक्रियाहरू सस्ता र सस्ता हुन्छन्।
फोन, टेलिभिजन, र कम्प्युटि ofको अभिसरण धेरै हदसम्म पूर्ण हुनेछ।
कार र हवाइजहाजहरू अझै पनी ग्यासमा चल्नेछन्।
संयुक्त राज्यको ऊर्जा अझै पनि ठूलो मात्रामा कोइला द्वारा आपूर्ति गरिनेछ।
कम्प्युटर सफ्टवेयर धेरै हदसम्म गयो, सेवाको रूपमा सफ्टवेयरको साथ बदलियो। कम्प्युटरहरूसँग केवल ठूला डाटासहितहरू ब्राउजरहरू र इन्टरनेट सक्षम साना प्रोफाइल अनुप्रयोगहरू हुन्छन्।
वायरलेस जताततै उपलब्ध हुनेछ, एकीकृत समाधानको साथ ... वायरलेससँग किनमेल, वायरलेसको साथ खेलकुद कार्यक्रम अवलोकन गर्ने, इत्यादि।
अनुप्रयोग डिजाइन प्रयोगकर्ता इन्टरफेस को उपयोग गरेर प्रोग्रामिंग बाट उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित अनुप्रयोगहरुमा परिवर्तन हुनेछ।
जीपीएस जताततै हुनेछ, र भौगोलिक सूचना प्रणाली हामीलाई, हाम्रो बच्चाहरू, हाम्रो फोन, हाम्रो कार, आदि ट्र्याक गर्न प्रयोग हुनेछ।
घरेलू उपकरणहरू वेब मार्फत उपलब्ध सरल अनुप्रयोग नियन्त्रणको साथ इन्टरनेट तयार हुनेछ।
अलार्म प्रणालीहरू र क्यामेराहरू सबै इन्टरनेट तयार र वायरलेस हुनेछन्, ग्राहक र आपतकालीन कर्मचारीहरूलाई टाढाबाट जडान गर्न र मुद्दाहरू प्रमाणित गर्न अनुमति दिदै।
पहिचान पहिचान प्रणाली फिंगरप्रिन्टहरू, अनुहारहरू, र नेत्रगोलहरू भन्दा पर सर्छ - र वास्तवमा प्रोफाईल र खेलहरू विकास गर्न गति प्रयोग गर्दछ।
कम्प्युटरसँग मेमोरीको लागि कुनै चल भागहरू हुनेछैन (कुनै घुमाई ड्राइभहरू, डिस्कहरू, सीडीहरू, वा डीभीडीहरू)
संगीतकारहरू र तिनीहरूको संगीत ब्रांडहरूसँग संगीत सम्बन्धित कर्पोरेसनहरू द्वारा सम्झौता गरिनेछ। संगीत कुनै शुल्क बिना वितरित हुनेछ।
व्यक्तिगत अनुवाद उपकरणहरू र वास्तविक-समय डिजिटल अनुवादकहरू बैठक वा भिडियो कन्फरेन्सका लागि उपलब्ध हुनेछन्, भाषा र बोली अप्रासंगिक बनाउँदै।
पैसा हाम्रो दैनिक जीवनबाट धेरै हदसम्म अनुपस्थित हुनेछ, यसको सट्टामा हामी इलेक्ट्रोनिक मुद्रा प्रयोग गर्दछौं।
शल्यक्रियाका लागि उपकरणहरू पत्ता लगाइनेछ कि यसमा शारीरिक रूपमा स्पर्श नगरी टिश्युहरूलाई हेरफेर गर्दछ।
इन्टरनेट र ग्लोबल अर्थव्यवस्थाका कारण दमनकारी सरकारहरूको पतन जारी रहनेछ।
धन र गरीबीको बिचमा गिरावट आउँछ तर भोकमरी र कुपोषण बढ्नेछ।
धर्म धेरै हदसम्म असफल हुनेछ र अधिक समुदायमा आधारित आध्यात्मिक समर्थन प्रणाली बन्नेछ।
इन्टरनेट बिभिन्न तहहरु, वाणिज्यिक, निजी, सुरक्षित, आदि मा विकसित हुनेछ जुन एक अर्काबाट स्वतन्त्र छन्।
भाषा नाम खोजी र सामग्री मान्यता प्रख्यात भएपछि डोमेन नामहरू प्रायः असंबद्ध हुनेछन्। धेरै मानिसहरूले उपयोग पनि गर्दैनन् डट कमको अरु केहि।
डेभलपरहरू इन्टिग्रेटरहरूसँग विकसित हुनेछन् जसले लगिशिअन्सको लागि विकसित हुनेछन् किनकि कम्प्युटर भाषाहरू अधिक अस्पष्ट हुन्छन् र रचनात्मक समाधानहरू धेरै उपकरणहरूको प्रयोग अधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
सर्किट बोर्डहरू दुर्लभ हुनेछन् - कम भोल्टेज प्लग-इन प्रणालीहरू घनिष्ठ एकीकृत सर्किटहरू अधिक सामान्य हुनेछ। कुनै सोल्डर छैन, कुनै तार छैन, तातो छैन ... अधिक लेगोस जस्तै।
इलेक्ट्रिकल र रासायनिक आवेगहरूको माध्यमबाट विचारहरूको म्यापि .्ग चिकित्सामा यसको प्रवेश गर्दछ। ती रसायनहरू र विद्युतीय आवेगहरूको हेरफेर अर्को आउनेछ। औषधीहरू पीडा, इंजेक्शन, वा पाचन बिना स्थानीय रूपमा लिने विधिहरू हुने हुनाले गोलीहरू सामान्य हुने छैनन्।
औषधीले मोटापा निको पार्छ।
के तपाईंले वास्तवमै सोच्नुभयो कि म विश्व शान्ति भन्न जाँदैछु? होईन।
टैग: भविष्यमाभविष्यको भविष्यवाणीभविष्यवाणीप्रविधि भविष्यवाणी
नोभेम्बर,, २०१ at 17::2006 बिहान
ओहो ... एक फोनमा एमपी3को खेल्नुहोस्! मैले बिर्सें कि आविष्कार कसरी आश्चर्यजनक छ कि [सारक] हुनेछ।
कुपोषण? गरीबी? एप्पल आईफोन कहाँ छ?
डिसे 27, 2008 मा 8: 26 AM
म बस # 25 को लागी समाधान गर्छु।